Tag: wax iibsiga | Martech Zone
Waa Maxay Sababta Isku Xirka Dareenku U Noqon Doono Guusha Iibka Xilligan Ciidaha
Arbacada, Oktoobar 20, 2021 Arbacada, Oktoobar 20, 2021 Thea C. Myhrvold
Muddo ka badan hal sano, tafaariiqlayaashu waxay la tacaalayaan saamaynta masiibada ee iibka waxayna umuuqataa in suuqa lagu wado inuu wajaho xilli kale oo wax iibsi fasax ah oo adag sanadka 2021. Wax -soo -saarka iyo carqaladeynta silsiladda sahaydu waxay sii wadaan inay halaag ku sameeyaan awoodda haysashada alaabada lagu kalsoonaan karo in stock Hab-maamuusyada badbaadadu waxay sii wadaan inay macaamiisha ka horjoogsadaan inay booqashooyinka dukaanka ku jiraan. Iyo shaqo -yaraanta ayaa ka dhigaysa dukaammada inay ka cararaan marka ay timaaddo u adeegidda macaamiisha kuwaas oo
Suuqleyda: Aqoonsiga Dabeecadahaas oo udub dhexaad u ah Iibsashada Ingiriiska
Khamiista, Sebtember 7, 2017 Khamiista, Sebtember 7, 2017 Douglas Karr
Ma aragtay wixii aan halkaas ku qabtay? Midwester-kani wuxuu adeegsaday higgaadinta Ingiriiska ee hab-dhaqanka halkii uu ka isticmaali lahaa dhaqanka. Waxaan kaliya rabay inaan cadeeyo qof walba sida aan adduunyo u ahay ama u ahay. Xaqiiqdii waligey ma tagin Boqortooyada Midowday inkasta oo Scottish iyo Ingiriis dhaxalkoodu yahay dhinaca Hooyaday ee qoyska. (Fiiri taas? Mar labaad ayaan sameeyay!) Waayahay, kaftan iska dhaaf (doh!), Tani waa macluumaad aad u wanaagsan oo ay qabteen CM Brand. Runtii waan aaminsanahay inay tani tahay
10 Isbedelada Ecommerce Waxaad Arkeysaa Iyadoo Laga Hirgelinayo 2017
Arbacada, February 1, 2017 Khamiista, Febraayo 2, 2017 Douglas Karr
Ma ahayn waqti aad u fog ka hor in macaamiisha aysan runtii ku raaxeysanayn gelitaanka xogtooda kaararka deynta ee internetka si ay wax u iibsadaan. Iyagu ma ay aaminin goobta, ma ay aaminin bakhaarka, mana ay aaminin rarka… wax uun kuma ay aaminin. Sannado ka dib, in kastoo, iyo celceliska macaamilku uu samaynayo in ka badan kala badh dhammaan iibsiyadooda internetka! Waxaa ku weheliya dhaqdhaqaaqa wax iibsiga, xulasho layaableh oo ka mid ah meheradaha ecommerce, sahay aan dhammaanayn oo ah goobaha qaybinta, iyo
Shakhsi Ku Helida Adduun Camiran
Khamiista, Sebtember 10, 2015 Khamiista, Sebtember 10, 2015 Venkat Viswanathan
Meelaha tafaariiqda ee maanta lagu tartamayo, waxay bixisaa adeegyo shaqsiyadeed oo kaladuwan oo loogu talagalay dagaalka si loogu soo jiito dareenka macaamiisha. Shirkadaha guud ahaan warshadaha waxay ku dadaalayaan inay soo gudbiyaan khibrad macmiil oo la xasuusto si loo dhiso daacadnimo iyo ugu dambeyntii hagaajinta iibka - laakiin way ka sahlan tahay sidii loo qabtay. Abuuritaanka khibrada noocan ah waxay u baahan tahay qalab si aad wax uga barato macaamiishaada, u sameysato xiriiro aadna u ogaato nooca dalabyada ay xiiseynayaan, iyo goorta. Waxa si isku mid ah muhiim u ah waa ogaanshaha
Me-Commerce iyo Mustaqbalka Tafaariiqda
Tafaariiqdu si dhakhso leh ayey isu beddeleysaa - khadka tooska ah iyo khadka tooska ah. Dhaqan ahaan, hay'adaha tafaariiqda ayaa had iyo jeer lahaa faa'iidooyin hooseeya iyo mug badan si ay u soo saaraan natiijooyinka ganacsi ee ay ugu baahnaayeen inay ku noolaadaan. Waxaan ku aragnaa isbeddelo degdeg ah tafaariiqda maalmahan halkaasoo tiknoolajiyada ay xawaareynayso koritaanka iyo kordhinta waxtarka. Xarumaha tafaariiqda ee aan ka faa'iideysan way dhimanayaan… laakiin tafaariiqleyda ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadda ayaa leh suuqa. Isbeddelada tirakoobka dadweynaha, kacaanka teknolojiyada, iyo dalabaadka macaamiisha ee shaqsiyadeed